Olee otú Mee instructional Video na ihuenyo teepu e
> Resource> Record> Olee otú Mee instructional Video na ihuenyo teepu
Eme ka onye na instructional video nwere ike inyere gị mata website, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ. N'agbanyeghị na ị na-nkụzi ndekọ ọzụzụ videos, software Mmepụta eme ngwaahịa demos ma ọ bụ na-azụ ahịa na-eme n'ihu maka online ahịa, onye ọ bụla nwere ike ịmepụta ọkachamara na-achọ instructional videos enweghị mmemme nkà.
Ndị na-esonụ ọdịnaya ga-ekpuchi ọ bụla akụrụngwa nke na-eme ka instructional video na-agwa gị otú ị aga site na ya na ákwà ngebichi edekọ DemoCreator.
Ihe mbụ bụ na-amalite na doro anya atụmatụ. Chepụta a storyboard ma dee ihe ị chọrọ na-egosi-ege gị ntị na a na edemede. Iji mee ka ọ smart na nnukwu, omume dị mkpa.
Mgbe na-eji DemoCreator, na video kpọọ software weghara kọmputa gị na ihuenyo. Ị nwere ike kwụsị ihuenyo ndekọ site na ịpị F10 ma ọ bụ ịkwụsịtụ maka a okpukpu na F9. Mgbe ị gụsịa Ndekọ ọdịnaya, ọ bụ oge ime video edezi.
2 Tinye akomako
E nwere ụzọ abụọ ka ịdekọ instructional video na akomako. Otu bụ na-eme ka Tinye akà rà na Record akomako mgbe ị na-amalite ndekọ, mgbe ahụ họrọ kwere omume ụda ngwaọrụ ka ị chọrọ. Kwadebe a Maị ezi àgwà nke mere na i nwere ike tinye oké akomako mgbe Ndekọ instructional video.
Ụzọ ọzọ bụ na-emeghe audio nchịkọta akụkọ site na ịpị Audio na ngwá ọrụ mmanya mgbe ndekọ na-okokụre. Ebe a ị nwere ike idezi ẹdude audio track, ndekọ ụda mgbe replaying video ma ọ bụ nanị mbubata MP3 / WAV faịlụ dị ka azụ n'ala music.
3 Tinye ederede na pụrụ iche utịp
Nkenke, ebe a bụ ndị nkịtị pụrụ iche utịp na DemoCreator-enye icho mma gị instructional video.
Callouts: A igbe Pop elu-egosi nkọwa ma ọ bụ ọkwa.
Button: A button na-arụ ọrụ ụfọdụ mere mgbe pịrị na.
Animation: Fanye otu Flash na-aga aga, o nwere ike họọrọ si ndabere akụ ma ọ bụ mbubata si na mpaghara disk.
Mbugharị-n-pan: Bulie họrọ ebe maka ngosi na-emesi ike.
4 Tinye aha ma Ebe E Si Nweta
Right pịa na Guputa window na pịa New Slide. Ị nwere ike ịmepụta na aha ma Ebe E Si Nweta site inserting photos, foto, ederede na ihe ndị ọzọ n'ụzọ dị mfe dị ka iji MS PowerPoint.
5 Asuanetop maka nkekọrịta
Jide n'aka ihe nile na-mere nke ọma site Michael ndị instructional video, mgbe ahụ, i nwere ike na-ebipụta ya dị ka video na bulite ka video nkekọrịta saịtị. Kenkwukorita Flash na-aga aga na òtù LMS ngwugwu ndị dịnụ.
Ọ na-eji na-awa ike instructional video, ma ugbu a ihe na-aghọ nnọọ mfe na enyemaka nke ihuenyo-edekọ ihe. Ọ bụ OK ka instructional video na usoro na na-na bụla idaha ke 5 ~ 6 nkeji. A bụ otu ihe instructional video sample mere site DemoCreator na zuru ojiji nke niile akpọkwa kwuru n'elu.
Ma ugbu a, ọ bụ gị na n'aka ịbụ onye na-instructional video director. Were a na-agbalị na nwere fun.